ဒီဟာလေးကိုအရင်ဖတ်ပါ။ရုပ်ရှင်ကားတိုင်းရဲ့ အောက်မှာ ဒီမှာဒေါင်းပါ ကိုနှိပ်ပါ ပီးရင်5စကန့် စောင့်ပါ SKIP AD ကိုနှိ်ပ်လိုက်တာနဲ့ အော်တိုဒေါင်းလုပ်ကြလာပါလိမ့်မယ်။ကြော်ငြာတွေတတ်လာရင်ပိတ်ပစ်ပါ။အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ - GF/Wife Share
ဒီဟာလေးကိုအရင်ဖတ်ပါ။ရုပ်ရှင်ကားတိုင်းရဲ့ အောက်မှာ ဒီမှာဒေါင်းပါ ကိုနှိပ်ပါ ပီးရင်5စကန့် စောင့်ပါ SKIP AD ကိုနှိ်ပ်လိုက်တာနဲ့ အော်တိုဒေါင်းလုပ်ကြလာပါလိမ့်မယ်။ကြော်ငြာတွေတတ်လာရင်ပိတ်ပစ်ပါ။အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ > ကိုယ်တိုင်ရေးစာပေ > ကိုယ်တိုင်ရေးစာပေ > GF/Wife Share
Full Version: GF/Wife Share
pete166411-28-2016, 02:45 AM
ကျွန်တော်က ပြည်ပ ကပါ။ နိုင်ငံတော့ အတိအကျ မပြောတော့ပါဘူး။ နေတာ ၈နှစ်လောက်ရှိပြီ။ အိမ်ထောင်သက် က ၃နှစ်။ အမျိုးသမီးက လည်း မြန်မာ ငယ်ချစ်ပဲ။
DrMalay_Liker11-29-2016, 12:02 PM
pete166412-01-2016, 04:08 AM
Really? It's there any sites i can browse? I can share more exp later.
Aungko2901-07-2017, 09:26 PM
(11-28-2016, 02:45 AM)pete1664 Wrote: [ -> ]ကျွန်တော်က ပြည်ပ ကပါ။ နိုင်ငံတော့ အတိအကျ မပြောတော့ပါဘူး။ နေတာ ၈နှစ်လောက်ရှိပြီ။ အိမ်ထောင်သက် က ၃နှစ်။ အမျိုးသမီးက လည်း မြန်မာ ငယ်ချစ်ပဲ။